Geedka Orchard | January 2020
Ugu Weyn Ee Geedka Orchard
Siyaabo wax ku ool ah oo loo xakamayn karo cayayaanka
Qof kastaa wuu ogyahay in dhirta beerta iyo beeraha badani ay soo gaadheen saamaynta waxyeellada leh ee ku dhaca microorganisms iyo dulinada cayayaanka ee kala duwan. Ma jiro wax laga reebo iyo tubta. Haddii aadan garanaynin sida si habboon loo daryeelo tubaakada xilliga gu'ga, oo aadan qaadan tallaabooyin ka hortag ah ama daaweyn haboon, markaa cayayaanka ayaan kuu ogolaaneynin inaad ururiso dalag hufan oo miro ah.
Sida loo xaliyo aphids on plomme, siyaabaha ugu fiican
Aphids waa mid ka mid ah cayayaanka ugu caansan ee geedaha beerta. Waxay u keentaa waxyeelo weyn dhirta, ilaa dhimashadooda. Maqaalkani waxa aanu eegaynaa sida aphids ee khatarta ku jira geedaha iyo sida loola tacaalayo karbaashkan. Waa maxay khatarta malaxyada? Sababtoo ah cayayaanka ka hortagga cayayaanku, ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu u baahan yahay inuu ogaado waxa aphids u eg yahay tubta iyo sida loola macaamilo.
Qulqul: faa'iido, waxyeelo, sheyga kalooriga, halabuurka, isticmaalka
Plum waa mid ka mid ah midhaha ugu caansan carruurta iyo dadka waaweyn. Ka sokow xaqiiqda ah in macmacaan badan oo jecel yihiin laga sameeyey, midhaha sidoo kale leeyahay guryaha badan oo bogsiinaya. Dumarkuna ma lumiyo hantidooda wax daaweyn ah. Qulqulka: qiimaha nafaqada, fiitamiinada iyo macdanta Xeebta waxaa loo tixgeliyaa badeecad cunto, qiimaha nafaqadu waa qiyaastii 30 kcal halkii 100 g
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geedka Orchard 2020